Ithegi: idatha yedatha | Martech Zone
Ithegi: idatha yeselfowuni
NgoMgqibelo, ngoJuni 7, 2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, 2014 Douglas Karr
Itekhnoloji yeselfowuni itshintsha yonke into. Abathengi banokuthenga, bafumane umkhombandlela, bakhangele kwiwebhu, banxibelelane nabahlobo ngeendlela ezahlukeneyo zeendaba, kwaye babhale ubomi babo ngesixhobo esinye esincinci ngokwaneleyo ukuba silingane ezipokothweni. Ngo-2018, kuqikelelwa ukuba i-8.2 yezigidigidi zeselfowuni ezisebenzayo ziya kusetyenziswa. Kwakuloo nyaka, urhwebo lweselfowuni kulindeleke ukuba luye kwi-600 yezigidigidi zeedola kwintengiso yonyaka. Ngokucacileyo, ishishini lihlaziywa yile yokugqibela